4	August 26, 2014 11:53 AM
via Police hunt down MDC-T official | The Zimbabwean 26 August 2014 by Nelson Sibanda
Why aren’t the partisan zrfp hunting down all the well-known zanoid criminals proliferating our streets
ZIMBABWE RUINOUS POLICE (ZRP)
I said it before and I will say it again! There is no professional police force in Zimbabwe but a bunch of thugs who work for ZANU PF, in other words this outfit is a ZANU PF militia. Gone are the days when one was proud to be a policeman and the people would hold one in high esteem for being a policeman in Zimbabwe. Today ordinary Zimbabwean citizens do not trust the so called Zimbabwean police and view them as an extortionist unit which works for ZANU PF and not for the good of the law abiding citizens of the country. In Zimbabwe the word police immediately invokes thoughts of extortion, bribery, corruption, violence, torture and murder.